ဟာဗားနားမြို့ - Howling Pixel
ကိုဩဒိနိတ်: 23°08′N 82°23′W﻿ / ﻿23.133°N 82.383°W
↑ How Obama's US-Cuba deal could shape Havana's future။ Lonely Planet။ 10 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2012 Official Census။
ကာရစ်ဘီယံ (အင်္ဂလိပ်: Caribbean; (သို့) ; စပိန်: Caribe; ဒတ်ခ်ျ: Caraïben ; ပြင်သစ်: Caraïbe သို့မဟုတ် Antilles) သည် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တွင်းရှိ ကျွန်းများနှင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ပါဝင်သည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့် မြောက်အမေရိက ကုန်းမြေမကြီးတို့၏ အရှေ့တောင်ဖက်၊ ဗဟိုအမေရိက၏ အရှေ့ဖက်နှင့်၊ တောင်အမေရိက၏ မြောက်ဖက်တို့တွင် တည်ရှိသည်။
ကျူးဘားနိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာအရေးအခင်းဟုအမည်တွင်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွင် ကာရေဘီယံအရေးအခင်း(Caribbean crisis) (ရုရှား: Карибский кризис, tr. Karibskiy krizis) ဟု အမည်တွင်သည့် ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်းသည် ၁၉၆၂၊ အောက်တိုဘာတွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကျူးဘားနိုင်ငံကတစ်ဖက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတစ်ဖက် ၁၃ရက်ကြာရန်စောင်ကြသော အရေးအခင်းဖြစ်သည်။ It is one of the major confrontations of the Cold War, and is generally regarded as the moment in which the Cold War came closest to turning intoanuclear conflict. It is also the first documented instance of the threat of mutual assured destruction (MAD) being discussed asadetermining factor inamajor international arms agreement.After provocative political moves and the failed US attempt to overthrow the Cuban regime (Bay of Pigs, Operation Mongoose), in May 1962 Nikita Khrushchev proposed the idea of placing Soviet nuclear missiles on Cuba to deter any future invasion attempt. Duringameeting between Khrushchev and Fidel Castro that July,asecret agreement was reached and construction of several missile sites began in the late summer. These preparations were noticed, and on 14 OctoberaUS U-2 aircraft took several pictures clearly showing sites for medium-range and intermediate-range ballistic nuclear missiles (MRBMs and IRBMs) under construction. These images were processed and presented on October 15, which marks the beginning of the 13-day crisis from the US perspective.
On the Soviet side, Premier Nikita Khrushchev wrote inaletter from October 24, 1962 to President John F. Kennedy that his blockade of "navigation in international waters and air space" constituted "an act of aggression propelling human kind into the abyss ofaworld nuclear-missile war". However, in secret back-channel communications the President and Premier initiatedaproposal to resolve the crisis. While this was taking place, several Soviet ships attempted to run the blockade, increasing tensions to the point that orders were sent out to US Navy ships to fire warning shots and then open fire. On 27 OctoberaU-2 was shot down byaSoviet missile crew, an action that could have resulted in immediate retaliation from the Kennedy crisis cabinet, according to Secretary of Defense McNamara's later testimony. However, in the event itself, Kennedy stayed his hand and the negotiations continued.
၁၄၉၂တွင် ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ် က ယခုကျူးဘားကျွန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး စပိန်ဘုရင့်နိုင်ငံအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၈၉၈ တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သော စပိန်-အမေရိကန်စစ်ပွဲ မတိုင်ခင်အထိ ကျူးဘားသည် စပိန်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၂ တွင် အမေရိကန်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၃မှ ၁၉၅၉အတွင်း ကျူဘားတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားပြီး ဘာတစ္စတာ၏ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ ဖီဒယ်လ် ကက်စထရို က ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့ခဲ့သည်။ကျူးဘားသည် လူဦးရေ (၁၁)သန်းကျော်ရှိသော ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကရစ်ဘီယံပင်လယ် အတွင်း လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ကျူးဘားတွင် ဒေသခံမဟုတ်သော တိုင်နို နှင့် ဆစ်ဘိုနီ (Ciboney) လူမျိုးစုများ၊ စပိန်ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းက ကျွန်အဖြစ် ရောင်းချခြင်းခံရသော အာဖရိကသားများ စသည်ဖြင့် လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုစုံ ရောနှောနေသည်။
ကျူးဘားသည် စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း ၉၉.၈%ရှိသည်။ ဖွားသေနှုန်းမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်များထက်ပင် လျော့နည်းသေးသည်။ လူတစ်ဦးချင်း၏ မျှော်မှန်းနိုင်သော သက်တမ်းမှာလည်း ၇၇.၆၄ နှစ် ရှိသည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ် စာရင်းအရ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း ၀.၈ ရှိသော လွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးနေသည့် တိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ .
ဆန်းကြယ်သော ဖူးစာ (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဆန်းကြယ်သော ဖူးစာ (ဟန်းဂု : 남자친구(နမ်ဂျာချင်းဂူ) ၊အင်္ဂလိပ် : encounter/boyfriend ၊ မူရင်းမြန်မာပြန် : ချစ်သူကောင်လေး) သည် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပြီး ဆောင်းဟေကိုနှင့် ပတ်ဘိုဂွံတို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ tvN ရုပ်သံလိုင်းတွင် ၂၈ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ မှ ၂၄ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၁၉ အထိ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့ ၂၁ : ၃၀ (KST) အချိန်တွင်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲသည် တောင်ကိုးရီးယားဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲသမိုင်းတွင် rating အများဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ Channel7 ရုပ်သံလိုင်းတွင် ၂၀၁၉ခု မတ်လ၊ ၂၅ရက်တွင် စတင်ပြသတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း Channel 7၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
ဗီဂန်မြို့ (Template:Lang-ilo; Template:Lang-tl; Local pronunciation: [ˈbigän]) သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ စတုတ္ထအဆင့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး အီလိုကော့ ဆိုးပြည်နယ် (တောင် အီလိုကော့ ပြည်နယ်) ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကောတ်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့တွင် လူဦးရေ ၅၃,၈၇၉ ဦး နေထိုင်ကြသည်။
မိုက်ကယ် အဲရစ် (Michael Vaillancourt Aris) (၂၇ မတ်လ ၁၉၄၆ – ၂၇ မတ်လ ၁၉၉၉) သည် ဘူတန်လူမျိုးများ၊ တိဗက်လူမျိုးများ နှင့် ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းဒေသနေလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ၎င်းတို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်မှု စသည့် စာအုပ်များကို လေ့လာရေးသားသူဖြစ်သည်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး[ကိုးကားချက်လိုသည်]ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တွင်လည်း အရှေ့တိုင်းနှင့်ပါဠိဘာသာ သုတေသနပညာရှင် ပါမောက္ခ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပါဠိဘာသာ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်လေ့လာရင်း အိမ်ထောင်ကျသည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ဘူတန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက် နေထိုင်ကြသည်။ ရေးသားပြုစုခဲ့သော နီပေါ ဘူတန် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်း အများအပြားရှိသည်။ လက်ရှိ ဘူတန်ဘုရင်သည် ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်၏တပည့်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ အက္ခရာဝလီအတိုင်း စီထားသည့် မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်သည် အမေရိကတိုက်၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ တိုက်ဖြစ်ပြီး မြောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းနှင့် အများစုမှာ အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်ကို မြောက်ဘက်တွင် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် မြောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတို့ဖြင့်ပိုင်းခြားထားပြီး တောင်အမေရိကတိုက်သည် ၎င်း၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
လက်တင်အမေရိက (အင်္ဂလိပ်: Latin America) ဟူသည် ရိုမန်ဘာသာစကား (အဓိကအားဖြင့် စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာ) ကိုပြောဆိုသည့် အမေရိကရှိ နိုင်ငံများကို ညွှန်းဆို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဖက်နယ်နမိတ်မှ တောင်အမေရိက တောင်ဖက် အစွန်းထိ (ကာရစ်ဘီယံဒေသ အပါအဝင်) ကျယ်ပြန့်ကာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ပါဝင်သည်။ ဧရိယာအားဖြင့် ၁၉,၁၉၇,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့် (၇,၄၁၂,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းကာ ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေစုစုပေါင်းဧရိယာ၏ ၁၃% ခန့်ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာရင်းများအရ ၆၀၄ သန်းကျော်ဖြစ်သည်။ "လက်တင်အမေရိက" ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဟာဗားနား မြို့ဟောင်း သည် ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟာဗားနားမြို့ အဖြစ် စုစည်းထားသော စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် ၁၅ ခုထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မြို့လယ်ခေါင် နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မြို့တော်အတွင်း ဒုတိယမြောက် လူဦးရေ အသိပ်သည်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မူလပထမ ဟာဗားနားမြို့တော်၏ ဗဟိုချက်မလည်း ဖြစ်သည်။ နဂိုမူလ ဟာဗားနားမြို့တော်၏ မြို့တံတိုင်းများမှာ ယနေ့ခေတ် ဟာဗားနားမြို့ဟောင်း၏ နယ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။
ဟာဗားနားမြို့ဟောင်းသည် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။